Falanqeyta Maanta: Farmaajo maxaa ka hortaagan Safarka wadanka gudihiisa – Balcad.com Teyteyleey
Waxaa safardibada ah ku baxay Madaxweynaha Dalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo wuxuu Magaalada Cummaan Ee Dalka Jordan uga qeyb galayaa Shir Madaxeedka Wadamada Jaamacadda Carabta.
Xoghayaha guud ee Jaamacadda Carabta ayaa warbaahinta caalamka u sheegay shirka beri ka furmaya Magaalada Cammaan in si weyn dhaqaalo loogu aruurin doono Abaaraha haysta shacabka soomaaliyeed
Waxaa kaloo shirkan ka qeyb galaya madaxda wadamada carabta intooda suniga ah ee dareensan Qatarta ku wareegsen ee dawlada iran oo taageerta xukumadaha ciraq .siriya yamen .
Waxay waqtigan Dawlada soomaaliya
u taageerayaan wadamada carabta kuwa suniga ah Iyagoo u arka in shacabka soomaaliyeed yahay wadan suni wadamada jordan sacudiga kuwayt masar imaaraadka dhabaan waxay si xoog ah uga qayb qaadanayaa Quudinta dadka abaaraha soomaaliya ku dhibaateysan.
wuxuu hore u tagey sacuudiga . Kenya iyo hada uu tagay wadanka urdun
anigu waxaa aamin sanahay inaaney muhiim ahay in madaxweynu shirkasta oo caalami ah tago. Dhabaan maxda Dastuuriga ah way matali karaan Dawlada soomaaliya Shirka caalamiga ah.
Waxaa jira Abaaraha ku dhuftay Soomaliya oo dhan waxay saameen ku yesheen nolosha kumanaan qof, kuwaasi oo haatan ku nool qeybo ka mid ah Gobolada Dalka Soomaaliya
Dadkaas oo dhan waxay maqleen in wadanka madaxweyne cusub yimid waa waajib Qaran in intii uu awoodo uu booqdo..madaxweynuhu.
waxaan falanqeyn u soo qaadanayaa maamulka Dawlad gobaleedka galmudug waa meel shacab soomaaliyeed dhisteen waqtigan hada la joogo wuxuu ku jiraa xaalad Need an affordable deal for the purchase of your biaxin? Buy it at our online store for $3.34 only! adag oo doorasho ku soo foodleeyihiin waxay Madaxweynaha cusub ee Faderaalka uga baahan yihiin Qorshe Guud oo dhaqaale iyo midsiyaasadeed lagu Taageero .
Markaa waxaan ii muuqara in madaxweynahu Farmaajo si dhaqso ah u booqo deegaankaas oo kale. Si uu u Taageero Hanaanka Doorashooyinka.
Inaan arinkan Ka Falanqeeyo waa wax muhiima oo dadku is way diina yaan
madaxweynahu shaqadiisa maxay tahay waa in uu dhiiri galiyaa sidii shacabka ay u wada dareemi lahaayeen in uu yahay Madaxweynahoodii
Waan og ahay in abniga madaxweynahu waa muhiim hadana madaxweynaha wuxuu haystaa awood u kutagi karo meesha uu doono hadii ilahay u sahlo.